Sarkaal Ruush Ah Oo Qarxiyey Sirta Ka Dambaysa Mucjiso Kasoo Daahirtay Gacanta Cadmeed Oo Culimada Saynisku Walaacii Ugu Waynaa Ka Qabaan Iyo Werwer Muddo Dunidu Qarinaysay Oo Kashifmay.
Sarkaal Ruush Ah Oo Qarxiyey Sirta Ka Dambaysa Mucjiso Kasoo Daahirtay Gacanta Cadmeed Oo Culimada Saynisku Walaacii Ugu Waynaa Ka Qabaan Iyo Werwer Muddo Dunidu Qarinaysay Oo Kashifmay.
Monday March 20, 2017 - 16:13:44 in by Samiir Cabdi
Waddanka Ruushka ayay ka fakatay sir in muddo ah la qarinayay oo ay culimada saynisku walaac weyn ka muujiyeen taasi oo la xidhiidha mucjiso ka soo daahiryay Biyaha Gacanka Cadmeed illaa Baabal Mandab oo ah biyaha u dhaxeeya dalalka Jabuuti, Yemen, Somaliland Illaa Cummaan.
Admiral Maksimov oo ahaa taliyaha ciidamada badda ee ruushka Qaybta Waqooyi ayaa warbixin sir ah ku kashifay in ciidamada badda ee dunida ee ku soo qulqulayay in muddo ah Biyaha Badda Cas saldhigyona ka samaysanayay dalal ay ka mid tahay Jabuuti oo kulaasha marin biyoodkan ayaa la sheegay in ay ku gabanayeen la dagaalanka budhcad badeedda ,iyo argagixisadaay u arrinkaas ahaa Been abuur lagu daboolayey dilaac weyn oo badda hoosteeda kala badhay iyo god weyn oo albaab u eg oo ka furmay badda u dhaxaysa Biyaha Somaliland, Somalia iyo Yemen godkan ayaa biyaha nuugaya wuxuuna dhalinayaa biyo islaba rogaya iyo magnad wax soo jiidanaya, iyada oo warbixinta Ruushka ka baxday lagu sheegay in dillaacaasi kala durkinayo qabcadaha dhulka ee qaaradaha isku haya gaar ahaan qaaradda Asia iyo Afrika.
Waxa la sheegayaa in qabcadaha dhulka ee biyaha badda cas hoostoodu dilacayaan oo kala durkayaan 45 cm sannadkii walba gacanka cadmeed waana qiyaas aad uga weyn dhulka intiisa kale oo u dhigan qiyaastii 1500 km dilaac ku siman Malaayiin sano oo nooluhu jiray.
Dillaacan ayaa la sheegay in uu kasoo bilaabmay kuna beegan yahay meesha loo yaqaan Caluula Fartaag oo ku beegan Badda Maamul Goboleedka Puntland iyo inta u dhaxaysa jaziirada suqadara. Ilaa laga gaadhayo dhulka canfarta degto ee Xeebaha dalalka Jabuuti iyo Eretariya.
Warbixintan oo shaaciyey Sarkaalka Ciidamada Ruushka ka tirsan ee lagu magacaabo Admiral Maksimov ayaa lagu sheegay in magnadka goobta ka dhashay uu keenay qaybo ka mid ah dabaylihii iyo duufannadii roobabka watay ee dunida qaybo ka mid ah saameeyey ee lloo yaqaano (Jet Stream).
Warbixintan layaabka leh ee Admiral Maksimov oo aannu idiinka soo turjunay laguna baahiyey Internetka ayaa waxa ay sheegaysaa in laga cabsi qabo dab weyn oo badda hoosteeda ka dilaaca oo halakayn kara xeebaha Soomaalida ee gacanka cadmeed xiga illaa wadamada jabuuti, dhulka canfarta ethiopia iyo guud ahaan waddanka Yemen dabkaasina ku faafi karo dalal badan oo adduunka ah. (ILAAHAY SWT isaga ayaa xaalka dunida og) balse saynisyahanadu waxa ay arrinkan ka qabaan walaac weyn.
Warbixintani waxa ay xusaysaa in goobta dillaacani ka samaysmay ay tahay meesha ay ilaalada ka hayaan ciidamada Badda Ee Maraykanka iyo dunida oo dhan oo hadda fadhiisimo ka samaystay dalka Jabuuti.
Dillaacan badda hoosteeda ka samaysmay waxa markii hore helay ciidamada Faransiiska oo maraakibtoodu arkeen biyaha is laba rogaya sannadkii 2000 waxayna u habar wacdeen Maraykanka Iyo Ciidamada Midowga Yurub oo keenay khuburadiisii ugu caansanayd iyo qalabkiisii u danbeeyey sannadkii 2008 dii, waxa iyana ka daba yimid ciidamada Ruushka oo dhaqdhaqaaqan ka shakiyey, waxaana dhacday in Ruushka markii danbe lagu qanciyey inaanu dadka dunida cabsi galin arrinkaasina hoos loo dhigo. Inkasta oo 40 ilaa 60 jeer dhulka meeshaas gariiray. Hawlgalkan ayaa ahaa mid indhaha dalka adduunka laga sii jeediyey laguna mashquuliyey la dagaalanka budhcad badeeda.
Waxaana la tilmaamay dabka ka kici kara godkan iyo magnadka miyahani samaynayaan uu waxyeelayn karo ugu horrayn dalka Yemen iyo xeebaha dalalka jaarka la ah Badda Cas iyo Gacanta Cadmeed waxaanay hore saynisyahanada dalalka reer Galbeedka ee arrinkan wax uga ogaa dadkooda uga digeen in loo safro waxayna ku tilmaameen sifada(Group zero)oo ka dhigan meel rogmad ka dhici karo.
Waxa loo habar wacday dunida oo dhan sida ciidamada badda ee Canada. Ciidamada badda ee Australia kuwa China, Malaysia Korea, India, Iran, Pakistan, Denmark, Japan, Holland, Germany, Norway, Belgium iyo kuwa carabta uga danbeyntiina waxa hadda ku soo biirtay dowladda sucuudiga oo iyadu arrinka lagu wareeray soo bandhigtay mucjisooyinkii Nabi Maxamad hore uga warramay marka laga hadlayo dillaaca dhul gariirka badda oo ka mid ah calaamadaha shanta ah ee saacadda qiyaamaha.
Dalka Sucuudiga iyo dowladaha khaliijku waxa ay go’aansadeen inay degaan xeebaha Somalia si ay xaaladda ula socdaan. Waxayna damacsanyihiin inay saldhigyo ka furtaan Berbera iyo Boosaaso. Waxa hadda socda Hawlgalka loo bixiyey (False Flag) oo badda Soomaaliya iyo inta u dhaxeysa waa la haystaa ciidamada badda ee dunida ayaa ku dhan oo ku gadaaman. Maraakibta badda quusta ayaa howlgalo ka wada.
Ugu dambayn Akhriste haddii aad xiisaynayso Warbixinta Admiral Maksimov waxaad ku baadhaa mishiinka Google adoo qoraya Admiral Maksimov Report.
Waxa kale oo xusid mudan in Warbixintan Admiral Maksimov sannadkii 2014 Bilowgiisii loo gacan galiyey Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin wuxuuna ku shaabadeeyey(Top Secret Classified)oo Macnaheedu yahay (SIR CULUS OO XAFIDAN).
Waxa kale oo aad faahfaahin ahaan uga baadhi kartaa Google adiga oo ku qoraya (Myterious vortex in Golf aden).